Stavanger, ebe njedebe na Norway | Akụkọ Njem
Stavanger, njedebe na Norway
Mariela Carril | | Ebe njegharị, Norway
Otu n'ime saịtị kacha ochie na Norway bụ Stavanger. Ọ bụ obodo na obodo nke sitere na narị afọ nke iri na abụọ, mana nke bịara dịrị ndụ na narị afọ nke iri abụọ n'ihi ụlọ ọrụ mmanụ.
Taa, ọ bụ obodo dị egwu, otu n'ime obodo kachasị ukwuu n'ime Norway, na ebe njem nleta.
2 Itingga Stavanger
Dị ka anyị kwuru, ọ bụ otu n'ime obodo ndị kacha ochie na Norway na ọnọdụ ya dị mkpa n’akụkọ ihe mere eme nke mba ahụ. Nwee a ogbu mmiri eke ma di na uzo uzo ahia ahia ahia na odida anyanwu.
Mgbe Iso Christianityzọ Kraịst rutere, mmekọrịta dị n'etiti Stavanger na Europe, ọkachasị Great Britain, siri ike, na-ewepụ ofufe nke Vikings. Ọnụnọ Ndị Kraịst malitere ịdị ezigbo ike, aka na aka ebe obibi ndị mọnk raara onwe ya nye akwukwo, mmekorita nke emere site na Etiti oge gboo ọ bụ ezie na mgbe Ndozigharị ahụ, ọnọdụ bara uru nke ndị nwe okpukpe okpukpe gbanwere n'ụzọ dị egwu.
Ndị German wakporo obodo ahụ na WWII, dịka mba ahụ dum, na mgbe esemokwu ahụ gasịrị, N’ọgwụgwụ afọ ndị 60, ọganihu mmanụ malitere mgbe achọpụtapụtara nkwụnye ego na North Sea. Stavanger ghọrọ etiti ala ọrụ n'ụsọ osimiri ahụ, na-agbakwunye agwaetiti ndị dị nso.
Kemgbe ọnwa Julaị obodo ahụ emeghewo njem nleta site na ụfọdụ mba Europe, mgbe niile n'ihe gbasara ọrịa a. Na Stavanger ochie obodo Ọ dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke ọdụ ụgbọ mmiri ahụ ma mara ya 173lọ osisi XNUMX ndị wuru n'etiti narị afọ XNUMX na mmalite nke narị afọ sochirinụ. N'ọnọdụ ọ bụla, iwu osisi abụghị nanị mpaghara a, ebe ọ bụ na mkpokọta ọ ga-enwerịrị ihe dị ka puku ụlọ 8 nke ụdị dị iche iche na obodo niile.
Oge niile bidoro tupu Agha Worldwa nke Abụọ ma nwee ụdị dị iche iche dị ka ndị nke Functionalism, ụdị alaeze na Art Nouveau. Otú ọ dị, ebe kachasị mma nke ụlọ osisi ndị a dị ebe a, na nke ochie. N'ezie, mpaghara ahụ na-etinye uche nchịkọta ụlọ osisi kachasị ukwuu na Europe ọ bụkwa ya mere o ji nweta ọtụtụ onyinye. Ọbụnadị taa ọ bụ ebe obibi mara mma ma enwere ebe a na-azụ aka na ụlọ ahịa, yana ebe ngosi ihe mgbe ochie.
Ndị ebe a na-etu ọnụ maka ụlọ ha na ubi ha, mara mma n'oge opupu ihe ubi na ọkọchị. Ha abụghị nnukwu ụlọ na enwere ike igbasasị ma megharia. N'oge ndị ọzọ ndị mmadụ na-eso ụlọ na-aga ebe a, ikekwe sitere n'agwaetiti ma ọ bụ site na Ryfylke ịchọ ọrụ oge, yabụ obere ụlọ ndị a, nke ugbu a na ala ha, nwere ike iwepụ mgbe ọ bụla ha chọrọ. Ha bụ ụlọ ọchaMa tupu ha na-acha ọbara ọbara ma ọ bụ edo edo dị ka agba ọcha dị oke ọnụ maka ezinụlọ na-arụ ọrụ.
Ihe ikwesighi ichefu ebe a bu Katidral Stavanger, Stavanger Maritime Museum na Petroleum Museum. Katidral Stavanger bụ katidral kacha ochie na Norway ọ dịkwa n’etiti obodo ahụ. Owuwu ahu bidoro na 1100 wee wuchaa ya na 1150. A raara ya nye Saint Swithun, Bishop mbu nke Winchester. Ọ gbara ọkụ na 1272 wee wughachi ya n'ụdị ndị Romanesque nke mbụ wee gbasaa na ụdị Gothic ka oge na-aga.
N'ime narị afọ nke XNUMX ọ nwere mgbanwe ndị ọzọ yana ee, ee, ọbịbịa maka ime dị jụụ kwesịrị ya. Breidablikk bụ ụlọ ezinụlọ ochie nke echekwara nke ọma na ụdị narị afọ nke iri na itoolu. Ọ nwere arịa ụlọ ndị Victorian mbụ, textiles, tebụl, eserese oge, ọbá akwụkwọ sitere na 50s nke narị afọ nke XNUMX, ebe a na-atụ bọmbụ, ebe a na-asa akwa, ebe ndị ohu na-eje ozi, ngwa ọrụ ugbo, ụgbọ ala na ogige ndị mara mma. A windo gara aga.
Ọzọ yiri saịtị bụ Llọ Ledaal, wuru dika agba oge obibi obibi nke ezinụlọ Kielland na 1799. Ọ bụ ụlọ nke ndị ọgaranya ma taa ọ na-arụ ọrụ dị ka Ebe obibi nke ndị eze na ụlọ ihe ngosi nka n'okpuru ikike nke steeti. Ubi ya bụ akụkọ ihe mere eme ma enwere uzo di nma iji gabiga ha.
Stavanger Museum bụ nke ọdịbendị na eke akụkọ ihe mere eme ma meghere na 1877 na saịtị ọzọ, ịkwaga na njedebe nke narị afọ nke XNUMX ruo ebe ọ dị ugbu a. O nwere otutu ngalaba, eserese, zoology, umuaka na ndi ozo. N'ikpeazụ, Emere ihe nkiri Petroleum na 1999 ma ọ bụrụ na ị hụ ya n’elu oké osimiri, ọ ga-adị ka ọdụ mmanụ mmanụ. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa na ala dị n'ụsọ oké osimiri nke Stavanger.
E wuru ya na okwute, ihe aja na iko ma buru oke ibu. Nchịkọta ya na-elekwasị anya na ọrụ mmanụ nke North Sea na enwere ntakịrị ihe niile mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata etu ụlọ ọrụ a si arụ ọrụ ọ bụ nnukwu ebe. Ọzọ na-akpali ewu bụ - Valbergtarnet, otu n'ime ndị kasị ochie, nke dị n'ebe ugwu nke Market Square, na Holmen peninshula, akụkụ kasị ochie nke obodo ahụ.
valbergtarnet Ọ bụ ụlọ elu nleba anya nke emere na 1853 n’akụkụ kasị elu nke obodo ahụ. A na-enwe mgbe niile na-eche nche iji chọpụta ọkụ nwere ike ịnweta ma taa, na-enweghị onye nche, ọ na-enye ezigbo echiche nke obodo, na mgbakwunye na inwe ụlọ ngosi ihe nka na ala mbụ.
Ma gịnị banyere ná mpụga obodo? Ọfọn, mpaghara mara mma ebe ụfọdụ ihe ịtụnanya dị ebube na-apụta dị ka ama ama Preikestolen, the pulpit. Nnukwu okwute a dị mita 604 n’elu oke osimiri ma bụrụkwa nke a kacha eleta na ógbè ebe Stavanger dị, Rogaland. Eziokwu: na 2017 puku mmadụ 300 bịara leta ya, na iru ya na-egosi elekere anọ ibugo onu ime kilomita asatọ.
Ibughari onu adighi adighi mfe ka ha wee nwee ike inwe ntughari uzo. Ihe dị mma bụ na Pulpit nwere ike ịga leta ya n’afọ niile, ọ bụ ezie n’oge ọkọchị ọ mara mma karịa (site n’April ruo Ọktọba, Nọvemba). Have ga-eji akpa azụ, gbakọọ na 30 lita zuru oke, yana ekwentị, eserese, tọọchị na ngwa enyemaka mbụ. Routezọ n'onwe ya na-amalite na Preikestolen fjellstue, ụlọ akwara, nke eji ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ mmiri, ma ọ bụ ụgbọ ala si Stavanger rute.
Enwere ụzọ gasị ma ọ bụrụ na ịnweghị ahụmịhe ọ bụ nhọrọ kachasị mma. Otu na-aga n'ihi na Mpaghara Ryfylke ya na fjords na ugwu ya. N'ebe ọwụwa anyanwụ nke Stavanger, mgbe ị gachara obere njem ụgbọ mmiri, ị ruru Aha ya bụ Lysefjord, nke dị kilomita iri atọ na asaa n’ogologo na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita abụọ n’obosara. Mmiri ya dị ezigbo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma nwee ihu igwe kachasị mma, o nwere ihe karịrị otu puku mita n'ịdị elu. Mara mma echiche.
Anyị kwuru na mbido na Stavanger bụ obodo dị mkpa n'ụsọ osimiri ma na ọ na-agbasa n'ime agwaetiti ụfọdụ. Agwaetiti dị n’ebe ugwu, n’etiti agwaetiti na agwaetiti, otu n’ime ihe ndị kacha ewu ewu bụ obere Nwokocha, nke jikọtara na agwaetiti buru ibu, Monteroy, site na akwa mmiri. Obere agwaetiti a ma ama maka ya Ogige Augustian nke narị afọ nke iri na atọ. Ejiri ụgbọ mmiri ruru ya ma ọ bara uru.
Ruo nchịkọta nke a ga-ahụ na Stavanger. Ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ gị, ọ ga-adị mma ma ị nọrọ na etiti obodo ebe enwere ọtụtụ ebe nkiri nwere ike iji ụkwụ rute. Obodo kachasị mma bụ obodo ochie, Gamle Stavanger, Vagen, n'ọnụ mmiri ahụ, yana ụlọ mmanya, klọb na ụlọ nri, na Bekkefaret, na mpụga na nso mpaghara ahụ. .
Kedu ka ị ga-esi gaa Stavanger? Site na ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ elu dị naanị nkeji 20 site na etiti, site na ụgbọ oloko si Oslo ma ọ bụ Kristiansand ma ọ bụ site na bọs si n'otu obodo ma ọ bụ Bergen.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Ebe njegharị » Stavanger, njedebe na Norway
Ihe ị ga-ahụ na Gengenbach, Germany
Obodo nke Toledo